Nagarik News - उफ्... बलात्कार!
13 Jul 2013 | 08:29am
लहान– सिरहमा चैतयता मात्र दर्जन बलात्कार घटना भए। सात बलात्कार, पाँच बलात्कार प्रयास । घटनाका १८ पीडकमध्ये पाँचमात्र पक्राउ परे, बाँकी फरार। तीन वर्षयता १९ बलात्कार मुद्दा दर्ता भएकामा चालु आर्थिक वर्षमात्र १६ घटना प्रहरीमा आए। तथ्यांकले विगतको तुलनामा यस वर्ष बलात्कार घटना ह्वात्तै बढेको देखाउँछ।
सिरहा एउटा दृष्टान्त हो, दोषीले विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति पाउँदा सर्वत्र बलात्कार घटना बढिरहेका छन्। अधिकांश घटना बेइज्जत हुने डरले सार्वजनिक नै हुँदैनन्। भएकालाई पनि परिवार र गाउँका पञ्चभलाद्मीले मिलापत्रका नाउँमा दम्पच बनाइदिन्छन्। केही प्रहरीमा पुग्छन्, उसले उजुरी नै लिँदैन। लिएकाको पनि अभियुक्त थोरैमात्र पक्राउ पर्छन्। पक्रिएका पनि प्रमाण अपुग भन्दै चाँडै छाडिन्छन्।
पीडितलाई न्यायको सट्टा आहत बनाउने यस्तै सामाजिक र कानुनी रवैयाले समाजमा दिनहुँ बलात्कार घटना बढिरहेका छन्।
डिएसपी हरिराज वाग्लेका अनुसार बलात्कार घटनाको जानकारी ढिलो आउने भएकाले अभियुक्त पक्राउ गर्न सकिँदैन। 'प्रहरीमा खबर आइपुग्दासम्म अभियुक्त भागिसकेका हुन्छन्,' उनले भने। ३५ दिनभित्रै घटना अनुसन्धान गरी मिसिल अदालतमा पेस गर्नुपर्ने समयसीमाका कारण अभियुक्त पक्राउ गर्नुभन्दा अन्य प्रमाण जुटाउने कार्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेको वाग्लेले बताउँछन्, 'ज्यान मुद्दामा अभियुत्क पक्राउलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, जबर्जस्ती करणीमा प्रमाण जुटाउनु महŒवपूर्ण हो।' सरकारी वकिल कार्यालय सिरहामार्फत ०६९ सालमा ११ वटा जबरजस्ती करणी र उद्योगका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पेस भए। दुईजनालाई थुनामा राख्ने आदेश भएको सरकारी वकिल कार्यालयको तथ्यांकमा छ।
महिना दिनसम्म सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी एक युवतीलाई प्रहरी कार्यालयमै गाउँका पञ्चहरूले मुद्दा दर्ता नगर्न धम्क्याइरहे, प्रहरी मूकदर्शक बने। सिरहा सोठियाइन–५ की १७ वर्षीया युवतीलाई छिमेकी गाविस भगवतीपुर तमसुइयाका तीन युवकले अपहरण गरी एक महिनासम्म सामूहिक बलात्कार गरेको रहस्य बल्ल खुलेको छ।
आमाबाबु मामाघरकी हजुरआमाको दाहसंस्कारमा गएको मौका छोपी ती युवकले जेठ १२ गते राति १ बजे पिसाब गर्न निस्किएकी युवतीलाई घरपछाडिबाट आएर अपहरण गरेका थिए। बलात्कार पीडाबाट गुजि्ररहेकी उनी तीन दिनअघि बाबुको साथ प्रहरीकहाँ त पुगिन्, तर त्यहाँ पनि उनका लागि न्याय जुट्न सकेन। वडा प्रहरी कार्यालय लहानको नागरिक साहायता कक्षभित्रै पीडित पक्षले दबाब खेप्नुपर्यो । तामासुइया र सोठियाइनका पञ्चभलाद्मीले कानुनी कारबाही अगाडि नबढाई सामाजिक मिलापका लागि गाउँ फर्कन दबाब दिए। यादव थरका पीडितका बाबुले भने, 'प्रहरी कार्यालयमै यस्तो दबाब आउँदोरहेछ। न्याय पाउने ठाउँ नै पीडकमैत्री बनेपछि न्यायचाहिँ कसले दिने?'
पीडित युवतीका अनुसार अपहरण गरेर सोही रात उनीहरूले मझौरा र लहानदेखि १० किलोमिटर उत्तरको तरेगना गोविन्दपुर पुर्यासए। जंगलमा १० दिनसम्म पालैपालो सामूहिक बलात्कार गरिरहे। 'प्रतिकार गर्दा बेस्सरी कुट्थे। न खान दिन्थे न पिउन,' उनले भनिन्, 'असह्य भएपछि चेत हरायो, होस खुल्दा विराटनगरको न्युरो अस्पताल लगिएको रहेछ। चार–पाँच दिनपछि त्यहाँबाट भगवतीपुर तमसुइयास्थित पशुपति यादवको घरमा ल्याइयो।' त्यहीँबाट उनी बिहान तीन बजेतिर शौचालय जाने बहानामा भागेर घर पुगेकी थिइन्।
युवतीका बुबाले छोरी बेपत्ता भएको लिखित जाहेरी भोलिपल्ट जेठ १३ गते वडा प्रहरी कार्यालय लहानमा दिए पनि प्रहरीले चासो दिएन। 'छोरीको खोजी हुन नसकेपछि भागी विवाह गरी होला भनेर फेरि खोजबिन गरिनँ,' उनले भने, ‘एक महिनापछि एक्कासि घर आइपुगेकी छोरीको कथा सुन्दा छक्क परेँ।'
वडा प्रहरी कार्यालय, लहानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिराज वाग्ले भन्छन्, ‘पीडित युवतीले दिएको जाहेरीउपर अनुसन्धानपछि कारबाही बढिसकेको छ।' तर प्रहरीले कुनै पनि अभियुक्त पक्राउ गर्न सकेको छैन।
राजनीतिकर्मी सत्यनारायण यादव आधुनिकीकरणका नाममा समाज विकृत बन्दै गएको बताउँछन्। 'यहाँको मात्र होइन, तराई–मधेसको समाजमा महिला सुरक्षाको सवाल चुनौतीपूर्ण बन्दैछ,' उनले भने, 'महिला सुरक्षामा यौनिकता गम्भीर समस्या बनेको छ।’ पश्चिमा सभ्यताको घातक असर तराईमा देखिन थालेको उनको बुझाइ छ। समाजसेवी प्रमोद सिंह विकृत मानसिकताका कारण उमेरहदलाई पनि पार गरेर बलात्कारमा उद्यत हुनु डरलाग्दो अवस्था देखा परेको बताउँछन्। 'तीनवर्षे बच्चासमेत बलात्कारको सिकार हुनु समाजमा भयावह अवस्था आउनु हो,' उनले भने।
यौन दुर्व्यवहार तथा बलात्कारका समाचार नेपाली छापामा पछिल्लो समय बढिरहेका छन्। तर बलात्कार गर्नेहरूमाथि कारबाही नभएको र न्याय नपाएको पीडित परिवारको गुनासो छ। सिरहाको लालपुर प्ररा– १ मा चार वर्षीया बालिका सोही ठाउँका १८ वर्षे युवक प्रमोद कामती (केवट) बाट बलात्कृत भइन्। कामती अहिले फरार छन्। पीडित बालिका घर फर्किसके पनि स्वास्थ्यमा अझै सुधार आउन सकेको छैन। प्रहरीलाई खबर गरेको भन्दै गाउँका पञ्चहरूले धम्क्याउने गरेको पीडितका बुवा सुनाउँछन्। 'छोरीको स्वास्थ्य सुरक्षासँगै सामाजिक दबाब बढेको छ,' उनी दुखेसो पोख्छन्, 'थप उपचारका लागि खर्च छैन। सहयोग पाए राहत हुन्थ्यो।’ १० दिनअघि पश्चिमवर्ती चिकना–३ मा भैंसी चराउन गएकी १३ वर्षीया किशोरी पनि सोही गाउँ वडा नम्बर ७ का १८ वर्षीय सुरेश यादवबाट बलात्कृत भइन्। पीडित परिवारलाई गाउँमै मिलापत्र गर्न दबाब आयो। उपचार गराउन मिर्चैया अस्पताल गएको बेला पीडित पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयामा जाहेरी दर्ता गराए। त्यतिन्जेल पीडक भागिसकेको थियो। जाहेरी दर्ता गराएको सात दिन नबित्दै अत्यधिक रक्तश्राव भएकाले पीडित किशोरी पुनः जिल्ला अस्पताल सिरहा भर्ना भइन्। महिला विकास अधिकृत सौर्या साहको उपचार सहयोगपछि उनी घर फर्किसकेकी छिन्।
अस्पतालमा पनि पीडितलाई सुरक्षाको आभास भएन। 'तीन दिन अस्पताल बस्दा न सुरक्षाकर्मी थिए, न सुरक्षाको अनुभूति भयो,' मुक्ति नेपालकी अध्यक्ष श्याम साहले भनिन्।
जेठ ७ गते लहानबाट तीन किलोमिटर दक्षिण सोनमती मझौरा– ४ मा पाँच वर्Èीया बालिका ५० वर्षे वृद्धबाटै बलात्कृत भइन्। सोही ठाउँका मोहमद रुदल मियाँले ती मुस्लिम बालिकालाई बलात्कार गरेको मुद्दा लहान प्रहरीमा दर्ता भएको छ। लहान अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि घाइते बालिकालाई अन्यत्र लैजान चिकित्सकले रेफर गरे पनि आर्थिक अभावका कारण पीडित परिवारले उपचार गराउन सकेको छैन।
एक महिनाभित्र प्रहरीमा दर्ता बलात्कारका यी मुद्दाबाहेक प्रशस्त घटना छन् जसमा आर्थिक अवस्था र सरकारी बेवास्ताका कारण पीडितले सुरक्षित रहेर उपचारसम्म पाउन सकेका छैनन्। पाँच महिनाअघि धनगढी–९ की एक सुकुम्बासी किशोरी पनि सामूहिक बलात्कारमा परिन्। नजिकैको स्वास्थ्यचौकीमा प्राथमिक उपचार भयो। मेडिकल रिपोर्टका लागि सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराज लैजाँदा यातायत खर्च पीडित परिवारले नै बेहोर्नुपर्योग। न प्रशासनले सहयोग गर्योज, न त कतैबाट सहानुभूति।
‘बलात्कार घटनाका अभियुक्त तत्काल पक्राउ नपर्दा पीडितको उपचार–भर्पाई गराउन मुस्किल हुन्छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका इन्सपेक्टर ज्ञानकुमार महतो भन्छन्, 'अभियुक्त पक्राउ परे उनीबाटै पीडितको उपचार खर्च भराउन सकिन्छ।' गैरसरकारी र महिला संघ–संस्थाबाहेक पीडितको उपचारमा बाह्य स्रोतको विकल्प नभएको उनले बताए।
अदालत पुगेका २४ मुद्दामध्ये छ पीडक फरार छन् भने दुई साधारण तारेखमा रिहा। अदालतले एक जनालाई दुई वर्ष छ महिना कैद र अर्काेलार्ई पाँच वर्ष कैदका साथै २० हजार जरिवाना तोकेको छ। कैद कार्यान्वयन भए पनि क्षतिपूर्ति भराइएको देखिन्न। 'क्षतिपूर्तिका लागि पीडितले लिखित दाबी गर्ने प्रावधान छ,' अधिकारकर्मी श्याम साह भन्छिन्, ‘प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले क्षतिपूर्ति फैसला कार्यान्वयन नभएको हो।' अदालतमा धेरै मुद्दाको कैफियतमा 'प्रतिवादी फरार' लेखेर मिसिल थन्क्याइएको देखिन्छ।
न्याय पाउने निकायसम्म पीडितको पहुँच नपुग्नु मुख्य समस्या हो। मुक्ति नेपालकी साह भन्छिन््, ‘सामाजिक संरचनाका कारण बलात्कार गर्नेभन्दा पीडित नै समाजबाट तिरस्कृत बनिरहेका छन्।' झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र लोकलाजबाट बच्न पीडित महिला कानुनी कठघरामा जानुभन्दा पनि समाजमै मिलापत्र गर्न बाध्य हुने गरेको महिला अधिकारकर्मी देवकुमारी महरा सुनाउँछिन्। 'गाउँ–समाजमा मिलापत्र गरे तुरुन्त क्षतिपूर्ति पाइने हुँदा आफ्नो पीडा समाजमै शान्त पार्न महिला बाध्य छन्,' उनले भनिन्।
मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिभ
बलात्कार घटनामा मेडिकल रिपोर्टलाई अदालतले बलियो प्रमाणका रूपमा लिए पनि डाक्टरहरू यसलाई पूर्ण प्रमाण मान्न नहुने बताउँछन्। जिल्ला अस्पताल सिरहाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर दयाशंकर लाल कर्ण भन्छन्, ‘बलात्कार भए/नभएको हेर्ने विज्ञ यहाँ छैनन्। हामीले दिएको रिपोर्टलाई नै सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मान्नु हुँदैन।' बलात्कार भएपछि तत्काल पीडितलाई अस्पताल नपुर्याोउँदा प्रमाण नष्ट भइसक्ने उनी बताउँछन्, ‘यहाँ यस्ता घटनाको अधिकतर रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ।’
प्रहरीले पठाएको फारमको हो/होइन भन्ने प्रश्नमा अधिकतर उत्तर पीडितको विपक्षमै जान्छ। 'कतिपय अवस्थामा संघर्षका चिह्न, पीडितले लगाएको लुगाको अवस्था, घाउ वा चोटका आधारमा रिपोर्ट दिन्छौं,' उनले सुनाए। बलात्कार भएको पाँच–छ घन्टाभित्र अस्पताल पुर्याथउँदा पीडितको पक्षमा शतप्रतिशत मेडिकल रिपोर्ट आउँछ भने त्यसपछि नेगेटिभ रिपोर्ट आउने सम्भावना बढी हुन्छ। 'बलात्कार घटनाको रिपोर्टमा पनि बाह्य दबाब हुन्छ,' उनले भने, ‘डाक्टरको टिमले रिपोर्ट बनाउने हुँदा हामी घटनाप्रति संवेदनशील हुन्छौं।'